Mashiinnada matoorka dabka & biyaha Warshadaha - Shiineerada matoorrada dabka & biyaha Soosaarayaasha, Bixiyeyaasha
YTO POWER waxay bixisaa tiro balaaran oo ah matoorada naaftada ah ee 20hp ilaa 600hp iyo in ka badan 30 nooc oo ah wax kasta oo ka yimaadda ambalaasyada ilaa mishiinnada. Mashiinnada gawaarida dab-damiska waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad korantada ku qabsato dhisidda musiibada. Haddii uu yahay dab yar oo ku shaqeeya xafiiska ama dhacdo weyn oo kuleyl ah oo ka dhacda meel saliid ah, noo soo jeedsada alaabada badbaado leh iyo xasiloonida maskaxda. Kooxdayada waxay ku siineysaa khibrad aad loo habeyn karo oo ay ku taageerayaan sumcadda iyo aaminaadda hoggaamiyaha adduunka ee teknolojiyadda matoorrada. Qaar badan oo ka mid ah mashiinnada dab-demiska dabka ayaa la kulma Yurub CE iyo Australia AS2941 heerka, in kabadan lix kun oo matoorada gawaarida dabka u dhoofisa in ka badan 60 waddan. sanadkasta. Si aad u hesho matooradaada saxda ah ee loogu talagalay dab-damiska dabka, fadlan naga warso faahfaahin dheeraad ah.
matoorrada dabka & biyaha-20KW-YD380
matoorrada dabka & biyaha-24KW-YD385
matoorrada dab-damiska & biyaha-35KW-YND485
matoorrada dabka & biyaha-42KW-YSD490
matoorrada dabka & biyaha-63KW-Y4102
matoorrada dabka & biyaha-77KW-YT4108
matoorrada dabka & biyaha-90KW-YT4105T
matoorrada dabka & biyaha-125KW-YT6102T
matoorrada dabka & biyaha-137KW-YT6102TS
matoorrada dabka & biyaha-147KW-YT6108T